ဆောင်းရာသီ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
တစ်ဦး Bataleon ပျဉ်ပြားစီးသူကားအဘယ်သူနှင်းလျောစီး !!! ??? ??? သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူရကျိုးနပ်သည် ???
နှင်းလျောစီးသမားများ !!! Bataleon ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဘယ်သူစီးနင်းခဲ့သလဲ ??? တပ်ရင်းဘုတ်အဖွဲ့ကိုစီးပြီးတဲ့နောက်မှာငါ Burton ကိုစီးသလိုမခံစားရဘူး။ ဘယ်ပုံစံလဲ။ ငါနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည်
မြင့်မားသောထိန်သိမ်းထဲမှာ "စိတ္တဇနှင်းလျှောစီးလမ်းလျှောက်" ဆင်းသက်လိုအပ်ပါတယ်။ အဆင်းမြန်နှုန်းကိုလျှော့ချရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အခြေခံနိယာမ - ခြေထောက်များသည်အဆစ်များ၌အနည်းငယ်ကွေးကွေးပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြောင့်ဖြောင့်ထားစေသည်။ နှင်းလျှောစီးမှန်ကန်မှုပေါ်မူတည်သည်။
ဆောင်းရာသီအားကစားအမျိုးမျိုးကိုရေးပါ။ နှင်းအားကစား * အပြေးပြိုင်ပွဲ * အလွတ်တန်း * Alpine နှင်းလျှောစီး * နိုင်ငံဖြတ်ကျော်နှင်းလျှောစီး * Nordic ပေါင်းစပ် * နှင်းလျှောစီး ... ...
နှင်းလျှောစီးကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ နှင်းလျှောစီးများသည်စကိတ်စီးအတွက်ဖြစ်ပါကနာမည်ကြီးတံဆိပ်များဖြစ်သော Fisher၊ Madchus Atomic, Rossignol! (စျေးနှုန်းတစ်ခုအရဆိုလျှင်၊ သင်ကလိုလားသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကစျေးအသက်သာဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင်းလျှောစီးများသည် ၈၅၀၀ (Fisher)) ...
နှင်းလျှောစီး Rossignol Zymax စကိတ်စီးခြင်းသို့မဟုတ်အနုမြူ Pro ကိုစကိတ်? ဘယ်တဦးတည်းအပူချိန်နှင့်ဆီးနှင်းအခြေအနေများအကြောင်းကိုဒီထက်ဇီဇာပါသလဲ
Rossignol Zymax စကိတ်သို့မဟုတ် Atomic Pro စကိတ်? ဆီးနှင်း၏အပူချိန်နှင့်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်နည်းသည်ဇီဇာနည်းသောအရာနည်း။ ငါသဖန်းသီးတစ်ပင်ယူတာကပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ Atomic ဖြစ်လိမ့်မယ်
TISA skis - ဘယ်သူ့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်လဲ။
TISA skis - ဘယ်သူ့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်လဲ။ Novasport ကုမ္ပဏီ။ ယူအက်စ်အေရုရှားငါ့အမြင်ယူကရိန်း။ ယူကရိန်းမှာစက်ရုံတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့တစ်ခုတည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ "Fisher-Mukachevo" ကတော့ယူကရိန်းဖက်စပ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းသည် ...
ဘယ်နှင်းဘုတ်စီး ၀ တ်မှုအ ၀ တ်အစားသည်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးရှိသနည်း။ မည်သည့်စတိုးဆိုင်များတွင်သင်တွေ့ရှိနိုင်သနည်း။ Quiksilver - http://shop.quiksilver.ru/ Burton - http://www.burton4u.ru မီးပုံနှင့် LMA http://www.tema-sport.ru
မြင့်မားသောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအဆိုတော်တွေ, ရုရှကြယ်များ။ အမည်များ?
မြင့်မားသောအဆိုတော်များ, ရုရှားကြယ်။ အမည်များ? Dmitry Guberniev ။ Karp Udodov Polyp Porforov ထို့ကြောင့်ရုရှားတင်းနစ်ကစားသမား Maria Sharapova သည်အမျိုးသမီးများအကြားကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးကြယ်များစာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးမှရှိသည်။ မာရိ၏အမြင့်သည် ၁၈၇ စင်တီမီတာ၊
NNN သို့မဟုတ် SNS စကိတ်စီး၏ mounting သနည်း အဘယ်ကြောင့်ဤရွေးချယ်မှု? ကျေးဇူးပြုပြီးရှင်းပြပါ! တာဝန်ရှိကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
စကိတ်စီးရန်အတွက် NNN သို့မဟုတ် SNS တောင်ရှိသလား။ အဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှု? ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြနိုင်မလား။ ကြိုတင်ပြီးဖြေကြားသူများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Salomon လေယာဉ်မှူးများ (boots နှင့် crepes နှစ်ခုလုံး) -SNS သည် NIS ပန်းကန်အောက်ရှိ NNN တောင်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
weatherproof ဆီမှေးစလစ် SWIX F4 ပရီမီယံမှုန်ရေမွှား -10 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခက်နှင်းကျနေစဉ်အတွင်းလှိမ့်မထားဘူးသောအရာကို buoy? ပိုပြီး +
ရာသီဥတုအားလုံးသောလျှောနို့တိုက်သတ္တဝါ SWIX F4 ပရီမီယံမှုန်ရေမွှားသည်မည်သည့် buoy အမျိုးအစားကိုဆီးနှင်းခဲထဲတွင် -10 အောက်အောက်သို့မကျရောက်စေသနည်း။ ပိုများသော + နောက်ဆုံးတော့သူကအချို့သောအကွာအဝေးတွင်တတ်၏, ဒါပေမယ့်ငါသတိရကြဘူး ...
ရုပ်ပြစကိတ်စီးခြင်းတွင်မည်သည့်ခုန်ပေါက်ခြင်းများရှိသနည်း၊ ၎င်းတို့သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမည်သို့ကွာခြားသနည်း။ http://fskating.erlang.com.ru/lexicon.html သိုးမွေးအင်္ကျီ၊ salchow, rittberger, flip, lutz နှင့် axel Tulu # 769; n (English toe loop) သည်အရိုးရှင်းဆုံးခုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ပြန်စကိတ်စီးဖို့သင်ယူဖို့ဘယ်လို? အတားအဆီးများ၊ ခုံတန်းရှည်များသို့မဟုတ်နံရံများတပ်ထားသောရေခဲကွင်းပေါ်တွင်နောက်ပြန်စီးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်စကိတ်ကွင်းပေါ်တွင်သိပ်မများသည့်အချိန်ကိုရွေးချယ်ပါ။
SNOWBOARD - Twintip VS လမ်းညွှန်
SNOWBOARD - Twintip VS Directional Directional သည်ဖနောင့်ထက်နှာခေါင်းပိုကြီးသည့်နှင်းလျောစီးဖြစ်သည်။ အမွှာသိကောင်းစရာ - ခြေချောင်းနဲ့ဖနောင့်အတူတူပဲ။ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်လောက်မှာဖြစ်လာခဲ့တယ်။
အနာဂတ်မှာသို့လေ့လာရေး။ နှင့်အယ်လီနာ Rodionova ဘယျသူနညျး
အနာဂတ်သို့လေ့လာရေးခရီး။ ပြီးတော့အယ်လီနာရိုဒီယွန်နိုကဘယ်သူလဲ။ Radionova အယ်လီနာ Igorevna ရုရှားအသင်း ၂၀၁၂/၁၃ မော်စကိုအသင်း ၂၀၁၂/၁၃ မွေးနေ့
, skis ၏ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးပါ
ကျေးဇူးပြု၍ နှင်းလျှောစီးများရွေးချယ်ရာတွင်ကူညီပေးပါ။ အဓိကပစ်စည်းမှာဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေသောအမွှေးဖြစ်သည်။ ဂန္ထဝင်ကိုင်ထားသည့်နံ့သာမျိုးမရှိလျှင်သင်မသွားနိုင်ပါ၊ အကယ်၍ ၎င်းကိုကိုင်ဆောင်သူတစ် ဦး နှင့်ရိုက်လျှင်၎င်းသည်မြင်းကိုနှောင့်ယှက်သည်။ ထို့ကြောင့် ...
မြန်နှုန်းမြင့်စကိတ်စီးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအစီရင်ခံစာကိုစီးစကိတ်စီးခြင်းဆိုသည်မှာလူတစ် ဦး သည်အထူးပြုလုပ်ထားသောကိရိယာများ - ဖိနပ်နှင့် တွဲ၍ စီးသောစကိတ်များပေါ်တွင်ရေခဲမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရွေ့လျားသည့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမှတ်တံဆိပ်သည်အကောင်းဆုံးအရာစကိတ်စီးခြင်း။ သငျသညျခကျြခကျြ BOTAS အကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြောနိုင်သလဲ
ဘယ်အမှတ်တံဆိပ်ကအကောင်းဆုံးလဲ Czech BOTAS အကြောင်းဘာပြောလို့ရပါသလဲ BOTAS ဟာစကိတ်စီးတာကောင်းတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဘွတ်ဖိနပ်သည်လက်ရှိတရုတ်ဖိနပ်များကဲ့သို့တင်းကျပ်မှုမရှိပါ။ ဒီနေ့အကောင်းဆုံး ...
ငါ့ကိုနှင်းလျှောစီး၏ကျေးဇူးပြုပြီးမျိုး Nazavite !! သို့မဟုတ်ထို site ပေး! နှင်းလျှောစီးအမျိုးအစားများ ???
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုနှင်းလျှောစီးအမျိုးအစားများကိုပြောပြပါ။ ဒါမှမဟုတ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုခုပေး၊ နှင်းလျှောစီးအမျိုးအစားများ ??? နှင်းလျှောစီး၊ ခုန်ပြေးပြိုင်ပွဲ၊ ခုန်ကျော်ပြေးခုန်ခြင်း၊ russia2http://www.high-sport.ru/lyjsport/ မြောက်ပိုင်းအမျိုးအစားများ - နိုင်ငံဖြတ်ကျော်နှင်းလျှောစီးခြင်း၊
Björn Dalen နှင့် Ole Einar - သူတို့ဟာလူတစ်ယောက်လား၊ နှစ်ခုလား။
Björn Dalen နှင့် Ole Einar - သူတို့ဟာလူတစ်ယောက်လား၊ နှစ်ခုလား။ ဤသည်မှာခင်ပွန်းသည်နှင့်ဇနီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော Ulechka) ကြီးမြတ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောပေမယ့်သန့်ရှင်းသော! ဟုတ်ကဲ့၊
ရေရှည်တည်တံ့စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဘွယ်သော, skis Sable အားကစား LS ခေါင်ဝယ်?
စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုရှိသော Sable Sport LS စကိတ်စီးခြင်းကိုဝယ်ခဲ့ပါသလား။ ဒီဟာတွေဟာဘတ်ဂျက်စီးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်၊ အနည်းဆုံးတော့နှင်းကျပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကိုနူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာစီးနိုင်ပါတယ်။ နှင်းလျှောစီးများသည်ခေါင်မိုးအောက်တွင်လူးမလ ...
53 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,765 စက္ကန့်ကျော် Generate ။